Mametraka ny fanarenana nohavaozina ao amin'ny Bq Aquaris 5,7 "| Androidsis
Francisco Ruiz | | Fanarenana Android, Bq
Androany aho no nanazava ny fomba tsotra indrindra anananay Root ny Bq Aquaris 5,7 ″ ao anatin'ny 10 segondra fotsiny ary tsy mila mampiasa solosaina manokana mandritra izany. Tao anatin'ilay fampianarana azo ampiharina ihany dia nampanantena anao aho fa Ampianariko ianao hanova ny Stock Recovery o Fanarenana efa voafaritra ho toy ny fenitra, ho an'ny fanarenana voaova Avy amin'izany, ohatra, hananantsika safidy hamorona nomaniny ho solon'izay ny rafi-piasantsika manontolo, ary koa ny safidy ahafahana manazava ireo Romana masaka tsara indrindra hahazoana bebe kokoa amin'ity Phablet Android manaitra ity.
Eny, araka ny nampanantenaina dia trosa ary tsy misy olona te-hanan-javatra, eto dia mitondra ity fampianarana tsotra ity aho apetraho ao amin'ny Bq Aquaris 5,7 ″ ny fanovana nohavaozina, ao anatin'ny 5 minitra fotsiny, ary toy ny tutorial teo aloha, tsy mila mampiasa solosaina manokana ho an'ny fizotrany.
2 Ahoana ny fametrahana ny fanarenana nohavaozina ao amin'ny Bq Aquaris 5,7 ″
Ny fepetra takiana mba hahafahana manao apetraho ny Modified Recovery amin'ny Bq Aquaris 5,7 ″, Io ny efa namaka ny terminal teo aloha, satria ho an'ny fizotra manjelatra an'ity fanarenana vaovao ity dia tsy maintsy hampiasa rindranasa maimaimpoana tanteraka izahay izay ampidininay avy amin'ny Play Store an'ny Google manokana, izay mila alalana Superuser hahafahany miasa tsara.
Ny zavatra iray hafa tokony hataontsika dia alefaso ny debugging USB hita ao anatin'ny menio fanovana "Safidy fampandrosoana". Raha toa ka tsy miseho eo amin'ny toeran'ny Bq Aquaris 5,7 ″ ity fizarana ity dia tsy maintsy ampodirintsika izy amin'ny alàlan'ny fidirana "Momba ny fitaovana" o "Fampahalalana momba ny fitaovana" y tsindrio impito izay milaza fa isa ny. Ato amin'ity horonan-tsary ity dia asehoko anao ny fomba hanaovana izany mba tsy hanananao fisalasalana:
Ahoana ny fametrahana ny fanarenana nohavaozina ao amin'ny Bq Aquaris 5,7 ″
Amin'ity dingana ity dia hametraka ny ClockWorkMod Recovery kinova 6.0.2.8 (CWM):
Ny zavatra voalohany hataontsika dia ny misintona ny fampiharana maimaim-poana Mobileuncle MTK, avy amin'ny Play Store an'ny Google.
Ankehitriny, ary alohan'ny handefasana ny fampiharana dia handeha ampidino ity CWM 6.0.2.8 voalaza etsy ambony ity amin'ity rohy ity ihany ary hanao izany isika mandika tsy decompressing ny fototry ny fahatsiarovana anatiny ny antsika Bq Aquaris 5,7 ″. Raha nisintona azy mivantana avy amin'ny findainao ianao dia mendrika ny hamela azy ao anaty fampirimana Download izay ny fampirimana default ho an'ny fisintomana Android.
Hanokatra ny rindranasa izahay izao Mobileuncle MTK, hanome alalana ny Superuser izahay raha mangataka izany ianao ary dia tsindrio ny safidy Hanova fanarenana (Fanavaozana ny fanarenana):
Ankehitriny dia mivezivezy any amin'ny lahatahiry izay maka tahaka na misintona ilay rakitra izahay CWM 6.0.2.8 ZIP, mifidy azy izahay, manamafy ny fampiharana azy ary hanana ny Stock Recovery izay novaina tamin'ity fanarenana vaovao novaina ity.
Raha hiditra amin'ny fanarenana vaovao, ny sisa ataonao dia miditra amin'ny Mobileuncle MTK indray ary kitiho eo Mandrosoa indray amin'ny maody fanarenana.
Amin'ny fotoana voalohany hidirantsika amin'ity fanarenana vaovao ity dia tsara ny manao kopia backup amin'ny rafitra misy antsika ankehitriny, hahatratra izany amin'ny safidy isika nandroid backup inona no ao anatiny Backup ary hamerina.
Araho hatrany Androidsis satria hampahafantariko ianao ny Romana tsara indrindra ho an'ny Bq Aquaris 5,7 ″ ary koa ny fomba fametrahana azy mitovy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Bq » Ahoana ny fametrahana ny fanarenana nohavaozina amin'ny Bq Aquaris 5,7 ″ (Tena mora)
Botanicula dia vaovao avy amin'ireo mpamorona Machinarium
Araraoty tsara ny tantely any amin'ny toeram-pambolenao miaraka amin'ny fanavaozana ny Hay Day vaovao